Muuri News Network » XOG: Halkee lagu Diyaariyay gaarigii isku miidaamiyay Xarunta Degmada Howlwadaag?
XOG: Halkee lagu Diyaariyay gaarigii isku miidaamiyay Xarunta Degmada Howlwadaag?
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaaya weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday Xarunta Degmada Howl­wadaag ee Gobolka Banaadir.
Gaariga ayaa waxaa qaraxa ka hor la xaqiijiyay inay la socdeen laba maleeshiyo oo uga soo dagay meel aan ka fogeyn xarunta degmada Howl­wadaag kuwaa oo markii danbe kamid ahaa dadkii ku xoomay Xarunta qaraxa kadib, sida aan xigta ku helnay.
Degmada Howl­wadaag ayaa kamid ah degmooyinka ahmiyada u leh Alshabaab waxaana xusid mudan in kaalmaha koowaad ay uga jirto goobaha ay ka dhacaan dilalka.
Degmada ayaa sidoo kale saaran qeybo kamid ah wadada Makka Al­mukarama waxaana inta badan lasoo mariyaa gaadiidka ismiidaaminta ka geysta wadada Makka Al­mukarama.
Sidoo kale, xarunta degmada Howl­wadaag ayaa noqoneysa degmada keliya ee lagu fuliyay weerar ismiidaamin ah, marka laga soo tago degmada Wadajir oo gudaha loo galshay gaari ay wadada ka qabteen ciidamada ilaalada wadooyinka.